LinkedIn Inogonesa Kambani Mamiriro Ekuvandudza | Martech Zone
LinkedIn Inogonesa Kambani Mamiriro Ekuvandudza
China, Gumiguru 13, 2011 Svondo, Ndira 15, 2017 Douglas Karr
Chimwe chezvinhu chandave ndichichema chema kwemakore ndechekuti vezvenhau maapplication agara achivakwa neuyo munhu mupfungwa uye haambove nehutongi hwebhizinesi. Bhizinesi rave rakagara riri rechipiri kufunga sezvo vezvenhau mafomu akashanda pane yavo mari hova… asi zvisati zvamboitika.
Nekutenda, LinkedIn yakadzinga yekutanga kupfura uye yakagonesa kugona kwevanhu vari mukati mekambani kugadzirisa a chinzvimbo chekambani, kwete munhu mumwechete. Iye zvino unogona kutevera kambani kwete munhu uye ona zvigadziriso kubva kukambani iyoyo! Uku kupatsanura kukuru (uye iyo yandinoshuvira kuti Twitter igone).
Imwe katsamba, kuitira kuti izvi zvishande, uchafanira gonesa iyo Admin runyorwa pane peji rako rekambani peji. Ndiyo kiyi! Ndakawedzera Jenn Lisak kubva DK Nyowani Media uye ndakafunga kuti ini ndinobva ndangova maneja. Kwete ... izvozvi ndakavharirwa kunze kwekuvandudza yangu kambani!
Argyle Yemagariro: Shanduko yekutevera uye Yemagariro Midhiya
Gumiguru 14, 2011 pa 6:46 AM
Kutenda - yakanaka info-kugadzirisa!